[OFFICIAL] SIM Unlock Service - Unlock SIM khadi yefowuni yakho xa amanyathelo 3
Ukuvula ifowuni yakho ngamanyathelo alula 3!
Fast, ekhuselekileyo kunye esisigxina
1000 phones inkxaso, 100 ababoneleli network inkxaso
amazwe 60+ inkxaso
Khetha eliphezulu Yakho
Indlela elula, ukuzila, ekhuselekileyo kunye esemthethweni ukuba ukuvula ifowuni yakho.
awusoze kufuneka uphinde inkqubo. Unga zokugqiba izixhobo ifowuni njengokuba eqhelekileyo kwaye usebenzise ngalo naliphi womnatha ehlabathini.
Imiyalelo uvula iya kusebenza ifowuni livalelwe, kodwa khumbula ukuba uvula ifowuni akuthethi ukuyisusa ukusuka Blekhlista umthumeli. Ngaba ifowuni yakho abanamagama? khangela apha
Xa ukwenzeka ezinqabileyo asikwazi ukuvula ifowuni yakho nasiphi na isizathu phantsi uxanduva zethu, siza kukunika imali epheleleyo.
Uya kuba nako ukusebenzisa ifowuni yakho nasiphi na umboneleli womnatha ehlabathini.
Le ndlela esisigxina yaye angawugqithi iwaranti yefowuni yakho.
Ifowuni yakho akumele ushiye kwicala lakho. Qhubeka usebenzisa ifowuni yakho ngexesha lenkqubo iyavula.
Khetha ifowuni yakho uze uzalise ifomu yesicelo.
Buya ikhowudi yakho yokuvula nge e-mail.
Chwetheza ikhowudi iyavula kwifowuni yakho
Hlola ubume oda yakho
Vula mfono yakho
Cofa logo ye brand ukuba ukukhetha ifowuni yakho, Gcwalisa ifomu yesicelo uze ufumane step-by-step imiyalelo yakho yokuvula yi e-mail.?Once wena uyilandile eyam imiyalelo zethu elula ifowuni yakho iza zityhilwe ngoko nangoko yaye ukulungele ukusebenzisa nayiphi yenethiwekhi umnikezeli.
Gqibezela amazwe kunye nababoneleli network soGuquguquko
FAQ - mfono Ivula
+ Ndizenza ukuvula njani ifowuni yam Dr.Fone - SIM Unlock Service?
Ukuvula ifowuni yakho Dr.Fone - SIM Unlock Service, khetha umboneleli kwenza, imodeli, ilizwe kunye womnatha ifowuni yakho itshixiwe kuyo. Xa sifumana intlawulo, isicelo sakho siya kuqwalaselwa kwaye kwixesha unikezelo ongakwazi uya kufumana imiyalelo elula step-by-step nge e-mail kwi ukuba ukuvula indlela ifowuni yakho.
Ukuba ufuna uncedo nanini na ngethuba inkqubo yokuvula qhagamshelana nathi nge chat, ngomnxeba okanye media loluntu.
+ Ingaba kubiza malini ukuvula ifowuni yam?
Ixabiso ikhowudi iyavula kuyahlukana nedlela izinto ezininzi. Ixabiso ngqo ziya kuboniswa xa ukhetha umboneleli kwenza, imodeli, ilizwe kunye womnatha ifowuni yakho itshixiwe kuyo. Njengoko ngokunjalo kokufumana ngezaphulelo nokuvula nganye, nathi siquke izaphulelo kutsho kwi-50% kwi website yethu.
+ Ngaba iyavula osisigxina yaye esebenzayo kwamanye amazwe?
Ewe. Xa uyivulile ifowuni yakho kunye SIM Unlock Service soze kufuneka uphinde inkqubo. Unga zokugqiba izixhobo ifowuni njengokuba eqhelekileyo kwaye usebenzise ngalo naliphi womnatha ehlabathini.
+ Ixesha elingakanani ukuba ukuvula ifowuni yam?
Ixesha lonikezelo kwaqinisekisa kuxhomekeke kumboneleli lizwe kunye nothungelwano ifowuni itshixiwe kuyo. Kwesi sakhelo sexesha, kwakunye nexesha delivery avareji unlockings ezifanayo, izaku boniswa kwiskrini xa ubukhe zizaliswe kwifomu yesicelo.